ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်များအတွက် နိုင်ငံခြားက သူမရဲ့ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ မီးမီးခဲ - Cele Connections
ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်များအတွက် နိုင်ငံခြားက သူမရဲ့ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ မီးမီးခဲ
bilie | 21/04/2020 | Celebrity | No Comments
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲ့က ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာ အဆင့် (၄) ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိတိုင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မီးမီးခဲက သူမရဲ့ ကင်ဆာရောဂါကို နိုင်ငံခြားမှာပဲ ကုသနေလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မီးမီးခဲက မနက်ဖြန် ကင်ဆာရောဂါအတွက် ဆေးပြန်စစ်ရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် သူမအတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ အခုလိုပဲ ပြောထားပါတယ်။
“မနက်ဖြန်မှာ၃ လတခါ ဆေးပြန်စစ်ရတော့မှာပါ။ ဆုတောင်းသတိရပေးကြပါနော်။ ကျွန်မလဲ ဒီအတောအတွင်း အမှန်အတိုင်းပြောရင် သိပ်နေမကောင်းပါ။ ကင်ဆာ ဝေဒနာရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ဖိဖိစီးစီး ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဒဏ်တွေကြောင့် ကိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာ ကို ညဘက်တွေမှာတောင် အိပ်ရေးပျက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်facebook မသုံးဖြစ်တာပါ။”
“ဒါနဲ့ကြားဖြတ် ကျွန်မရဲ့ အထူးကုဆီဖုန်းဆက်မေးတော့ သူက ဘာဆေးပေးတယ်မှတ်လဲ? ဝမ်းပျော့ဆေးကိုသာပေးပါတယ်။ ပထမတော့ လူက ဘာလဲပေါ့နော်။ နောက်တော့သူပေးတဲ့ဆေးမုန့် ထုတ်ကို ၃ ရက်လောက်သောက်ပြီးချိန်မှာတော့ လုံးဝကို မကိုက်ခဲတော့တာပါ။ ကျွန်မ မျှဝေချင်တာလေးက ကင်ဆာရောဂါသည်တိုင်း ဝမ်းပုံမှန်သွားရပါမယ်။တနေ့ ကိုဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဝမ်းအကုန်အစင်သွားရင်တော့ဖြင့်ကိုက်ခဲခြင်းတွေလျော့ပါးသွားမှာပါလို့ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်အတွက်လဲ သတိတရဆုတောင်းပေးကြပါနော်။ မိတ်ဆွေများလဲ ရောဂါ များကင်းဝေးကြပါစေ” ဆိုပြီး ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
မီးမီးခဲကတော့ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို အချိန်များများခံစားခဲ့ရပြီး အခုဆိုရင် သက်သာစ ပြုနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မီးမီးခဲတစ်ယောက် ဆေးစစ်ချက် အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။
Source: The Real Mee Mee Khel-မီးမီးခဲ’s fb
Bilie _Cele Connections
ကငျဆာရောဂါဝဒေနာသညျမြားအတှကျ နိုငျငံခွားက သူမရဲ့ ဆရာဝနျပေးတဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး နညျးလမျးတဈခုကို ပွောပွလာတဲ့ မီးမီးခဲ
နိုငျငံကြျော အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ မီးမီးခဲ့က ကငျဆာရောဂါ ဝဒေနာ အဆငျ့ (၄) ကို ကြျောဖွတျခဲ့ပွီး အခုခြိနျထိတိုငျ ဆေးကုသမှု ခံယူနရေဆဲ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံရပျခွားမှာ နထေိုငျနတေဲ့ မီးမီးခဲက သူမရဲ့ ကငျဆာရောဂါကို နိုငျငံခွားမှာပဲ ကုသနလေကျြရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ မီးမီးခဲက မနကျဖွနျ ကငျဆာရောဂါအတှကျ ဆေးပွနျစဈရတော့မှာဖွဈတာကွောငျ့ သူမအတှကျ ဆုတောငျးပေးကွဖို့ အခုလိုပဲ ပွောထားပါတယျ။
“မနကျဖွနျမှာ၃ လတခါ ဆေးပွနျစဈရတော့မှာပါ။ ဆုတောငျးသတိရပေးကွပါနျော။ ကြှနျမလဲ ဒီအတောအတှငျး အမှနျအတိုငျးပွောရငျ သိပျနမေကောငျးပါ။ ကငျဆာ ဝဒေနာရဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကို ဖိဖိစီးစီး ခံစားနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဆေးဒဏျတှကွေောငျ့ ကိုကျခဲခွငျးဝဒေနာ ကို ညဘကျတှမှောတောငျ အိပျရေးပကျြပေါငျးမြားစှာနဲ့ပေါ့။ ဒါ့ကွောငျ့facebook မသုံးဖွဈတာပါ။”
“ဒါနဲ့ကွားဖွတျ ကြှနျမရဲ့အထူးကုဆီဖုနျးဆကျမေးတော့ သူက ဘာဆေးပေးတယျမှတျလဲ? ဝမျးပြော့ဆေးကိုသာပေးပါတယျ။ ပထမတော့ လူက ဘာလဲပေါ့နျော။ နောကျတော့သူပေးတဲ့ဆေးမုနျ့ထုတျကို ၃ ရကျလောကျသောကျပွီးခြိနျမှာတော့ လုံးဝကို မကိုကျခဲတော့တာပါ။ ကြှနျမ မြှဝခေငျြတာလေးက ကငျဆာရောဂါသညျတိုငျး ဝမျးပုံမှနျသှားရပါမယျ။တနကေို့ဝမျးထဲမှာရှိတဲ့ဝမျးအကုနျအစငျသှားရငျတော့ဖွငျ့ကိုကျခဲခွငျးတှလြေော့ပါးသှားမှာပါလို့ ထပျဆငျ့မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ မနကျဖွနျအတှကျလဲ သတိတရဆုတောငျးပေးကွပါနျော။ မိတျဆှမြေားလဲ ရောဂါ မြားကငျးဝေးကွပါစေ” ဆိုပွီး ဆုတောငျးပေးထားပါတယျ။
မီးမီးခဲကတော့ ကငျဆာရောဂါဝဒေနာကို အခြိနျမြားမြားခံစားခဲ့ရပွီး အခုဆိုရငျ သကျသာစ ပွုနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး မီးမီးခဲတဈယောကျ ဆေးစဈခကျြ အဆငျပွခြေောမှပေ့ါစလေို့ ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော။
“မြန်မာ ပြည် ရဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ငံရေးဇာတ်လမ်း ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်ထားတဲ့ အောင်ရေချမ်း “
မန္တလေးက ရေပေါ်ကစားကွင်းကြီးမှာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း မျှဝေလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
“သူ့ကို ကျွေးဖို့ ဇနီးဖြစ်သူ ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ မုန့်လုပ်နေပုံလေးကို ကြည့်ကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ရွှေထူး”
လူတကာကို စနောက်ကျီစယ်လေ့ရှိတဲ့ ကိုပေါက်ကို ဆေးကြီးကြီးထိုးပြီး ပညာပေးခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်ဗို